Linux vatambi vanofanirwa kumirira Norsca DLC yeHondo Yese: Warhammer | Linux Vakapindwa muropa
Linux vatambi vanofanirwa kumirira Norsca DLC yeHondo Yese: Warhammer
Hondo Total: Warhammer Ndiwo mutambo wevhidhiyo watatotaura nezvazvo pane dzimwe nguva pane LxA blog nekuda kwehunhu hwayo uye, chokwadika, nekuti iripo pamapuratifomu akasiyana siyana, kusanganisira GNU / Linux. Zvakanaka, ikozvino hatina nyaya dzakanaka dzakadai nezveNorsca DLC nyowani yakaburitswa yeHondo Yese, nekuti kunyangwe yakaburitswa paStam yeWindows, zvinoita sekunge kuburitswa kweLinux neMac kwakanonoka zvishoma uye vashandisi veaya masisitimu vanofanira mira zvishoma. Chimwe chinhu chave chakajairika uye chakajairwa kana zvasvika kumapuratifomu ane vashoma vashandisi ...
Iyo DLC kurongedza iyo yatove pano kune yakataurwa chikuva, inoda imwe yakati rebei nguva kuti usvike kwatiri. PaSteam unogona kuona kuti ichiri icon yeIndia haina kutsigirwa neLinux neApple's operating system. Asi isu takaverenga rumwe ruzivo muchitoro cheValve tinoona kuti pane mutsara unoti «Norsca iri kuuya munguva pfupi kuMacOS neLinux'Ndiri kureva, Norsca iri kuuya nekukurumidza kune maviri masystem, saka tinovimba ichadaro uye haitore nguva yakareba.
Zvichida izvo zve Feral tipe isu kushamisika kweAugust 24 gore rino, pazvinotarisirwa kusvika paLinux, kunyangwe pre-odha yatovepo muFeral chitoro. Nenzira, kune avo vasingazive kuti iyi DLC package kana iri inozivikanwa yeNorsca iri kuuya, taura kuti ichi chiwedzero chekuwedzera mashandiro uye mishandirapamwe yeHondo Yese: Warhammer.
Kana ari videojuegoChokwadi iwe unotozviziva, nekuti zvakanaka chaizvo uye zvakakurumbira, asi kana iwe uchiri kusaziva, taura kuti iri saga yeiyo chaiyo-nguva nzira yemavhidhiyo mitambo iwe yauchanyatsoda. Uye kana usati watovepo, unogona kuzviedza paLinux, kunyangwe kana usina iyi paketi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Linux vatambi vanofanirwa kumirira Norsca DLC yeHondo Yese: Warhammer
Isa uye gadzira Waini
Solus ichave zvakare nerutsigiro rweUbuntu snap mapakeji